TransferGalaxy Waa Shirkad Dhalinyaro Somaliyeed oo heshay Maal gelin Malaayiin Doolar ah |
TransferGalaxy Waa Shirkad Dhalinyaro Somaliyeed oo heshay Maal gelin Malaayiin Doolar ah
Shirkada iswidishka ah ee TransferGalaxy waxayku sii fidaysa aduunka oo dhan waxa ayna markasta soo kordisa adeegyadeeda cusub ee bixinta lacagaha caalamiga ah. waxay hada haleen maalgashi malayin doolar ah oo ka yimid shirkadda maalgashiga Alfvén & Didrikson iyo milkiilayaasha hadda jira ee BackingMinds si ay u maalgeliyaan ballaarinta. Tan iyo bilowgii sanadka 2016, waxay shirkadu dirtay lacag malaayin doolar ah.
Waxaa la aasaasay sannadka 2014 saldhiggeeduna yahay Vivalla, oo 200 km galbeedka Stockholm kaga beegan, TransferGalaxy waxay samaysay qaab degdeg ah, amaan ah oo qiimo jaban ah oo loogu talagalay in si qiimo jaban ah loogu diro lacagaha si loogu gaarsiiyo dadka aan lahayn akoonada bankiyada. Qofka qaataha ah ayaa maaliyaddooda ku hela Mobilekada gacanta, marka la barbar dhigo isticmaalka qaababka xawilaadihii hore ee lacagaha TransferGalaxy waxay ka dhigtay nimaad dagdag ah oo fudud.
Aasaasayaasha, Yosef Maxamed, Khalid Qassim , Cali Maxamed, Mustafe ibraahim iyo Cabdiraxman ahmed kuwaas oo dhammaantood lacag u dira xubno ka mid ah qoysaskooda, waxay xaqiiqsadeen fursaddaha, kadib waxay aasaaseen TransferGalaxy: “Horaantii, shirkadaha sida Western Union waxay haysten suuqa. Macaamiisha waxaa lagu qasbay in ay bixiyaan khidmad aad u sarreeya ayna u isticmaalaan siyaabo badan oo aan amaan ahyn.
TransferGalaxy, isticmaalayaashu waxay u soo diri karaan lacag fudud oo dhakhso badan, iyagoo bixinaya lacag ka yar sidii hore, laakiin sidoo kale waqti ka yar iyo kharash ka yar Shirkadaha kale “ayuu yidhi Yosef Mohamed, oo ah madaxa shirkada iyo aasaasaha.
Xawaaladaha – lacag u dirista adunyada- waxay caddadkoodu dhan tahay 605 bilyan oo doolar caalamka oo dhan sannadkii 2016. Marka la barbardhigo shirkadaha sida TransferWise ama PayPal, TransferGalaxy waxay bartilmaameed u tahay ilaa 2 bilyan oo qaan-gaar ah oo adduunkayda kala jooga kuwaas oo sii kordhaya ku tiirsanaanta kaabayaasha moobiilka lacag bixinta. Lacagta moobaylku waa hab iyo nimaad sii kordhaya oo adduunka oo dhan ah, waxaana qayb ahaan ka mid ah korodhka internetka iyo isticmaalka moobileka, laakiin sidoo kale xasilloonida nidaamyada dhaqaale ee dalalka qaarkood. Tusaale ahaan Soomaaliya, dalka ay kasoo jeedan aasaasayaasha, 73% dadka qaangaarka ah ayaa isticmaalaya lacagta mobile, dhanka kale 15% dadweynaha ayaa haysta akoonada bankiyada. Lacagta moobaylku waxay u sahlaysaa kala iibsiga iyo korarka dhaqaalaha.
Korodhka lacagta mobile-ka ayaa u saamaxday TransferGalaxy inay
si degdeg ah u kordhiso oo ay ka faa’iidaystaan ​​dadka ku nool wadamo badan oo aduunka oo dhan ah. Sannadkii 2017, shirkaddu waxay xaqiijisay rukhsadda EEA-da oo ay bixiso hay’adlacag bixisnta, taas oo u saamaxday shirkadda inlacag laga diri karo dhammaan Wadamada Yurub.
Maalgashigan ayaa loo isticmaali doonaa in lagu dedejiyo ballaarinta shirkadda dhanka yurub. TransferGalaxy horeba waxay ka shaqaynjirtay 25 dal oo Europe ah, shirkaddu waxay kordhin doontaa labadaba dhinac ee offline iyo online iyadoo sii ballaarinaya xoojinayana sugnaanta iyo habsami u socodka adeega.
Isku-dubaridaha iyo madaxa shirkada Yosef Maxamed ayaa ku faraxsan mustaqbalka shirkada: wuxuna yiri
Shirkadan waxay u tahay hormuud ama hiigsi dhalinyarada Geeska Africa gaar ahaan Somalida, waxayna tusinaysa in qofku wixi uu ku hamiyo uu gaari karo, waxanan balan qadanayna dhalinyarada wadanka inan arimo badan kala shaqayno, haday noqoto dhanka dhaqalaha, tabo barada iyo waxbarashada.